कस्तो लाज नभएको पुरुष ! युवतीको पछाडि गुप्तांग निकालेर उभिए - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो लाज नभएको पुरुष ! युवतीको पछाडि गुप्तांग निकालेर उभिए
एजेन्सी । बाँच्नुपर्छ कस्ता-कस्ता खबर सुन्न पाइन्छन् ! यस्तै खबर आज तपाइँलाई जानकारी गराउँदै छौँ । सुन्दा निकै अचम्म लाग्ने तर घटना यथार्थ हो । यो घटना हो भारतको । गत साताको सोमबार भारतको बैंगलोरमा एक युवकले यस्तो हर्कत गरेका छन्, सुन्दा नै लाज लागेर आउँछ । उनी युवतीको पछाडि गुप्तांग निकालेर उभिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस दलाई लामा बिरामी परेपछि अस्पताल भर्ना
मेट्रोमा यात्रा गरिरहेका उनले उभिने क्रममा आफ्नो गुप्तांग बाहिर निकाले । उनले निकाले मात्रै होइन् त्यसपछि एक युवतीसँग अश्लिल हर्कत पनि गर्न थाले । युवतीले पछाडि छाम्दा तर्सिएर एक्कासी चिच्याइन् ।
युवतीको कुरा सुनेपछि त्यहाँ भएका यात्रुले ती युवकलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् । त्यसपछि यात्रीले युवकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएको भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । २७ वर्षका यी युवक एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । युवक उत्तर कन्नाड जिल्लाको सिरसीका प्रविण बी हेगडे भएको बताइएको छ ।
युवतीले उजुरीमा बताएअनुसार युवक मेट्रोमा उनको पछाडि उभिएका थिए र उनीसँग लगातार टाँसिइरहेका थिए । उनले युवकको यस्तो हर्कतको विरोध गर्दै टाढा रहन भनिन् । यत्तिकैमा युवतीलाई केही चिसो महसुस भयो ।
उनले पछाडि छाम्दा युवकको गुप्तांग उनको हातमा आयो । त्यसपछि उनी आत्तिएर चिच्याउन थालिन् । युवकमाथि अश्लील कार्य, यौन प्रताडना र बलात्कारको प्रयासको मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बिहारमा प्रहरी विद्रोह, १७५ प्रहरी बर्खास्त, थुप्रै अधिकारीहरू गिरफ्तार हुनसक्ने
ट्याग्स: Guptang, India, Penis